dia tamin’ny fotoana izay nandalovan’ny fihaonana an-tampon’ny frankofonia farany teo no fotoana farany ihany koa nanantenana zavatra hitondra fiovana eto amin’ny firenena avy amin’ny fitondrana ankehitriny sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Fifanekena tokana anisan’ny nandrandraina tamin’iny fotoana iny ny mikasika ny famerenan’ny Frantsay ireo nosy manodidina antsika. Tsy nataon’ny filoham-pirenena anefa io ka dia tsy misy hantenaina intsony amin’izao fitondrana ankehitriny izao. Raha ny fifidianana ihany koa no andrasana hitondra fiovana dia tsy misy hantenaina. Fitakiana 4 no nitondra fanovana teto taorian’ny fahaleovantena, hoy izy. Ny vahoaka sisa no andrasana ny fanapahan-keviny na hiandry fotsiny na hijery izay azony atao, raha ny fanehoan-kevitr’ity oloben’ny tontolo politika ity hatrany.